Fedora 28 beta yave kuwanikwa nezvakawanda zvitsva maficha | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Fedora 28 beta yave kuwanikwa nezvakawanda zvitsva maficha
Nezuro iyo Fedora 28 Beta Kuwanika Pakarepo, inotevera vhezheni yeiyi yakanaka Linux kugovera.
Pakutanga kunotarisirwa kupera kwaKurume, Fedora 28 Beta yave kuwanikwa kuti iriongororwe neruzhinji, ichiunza nezvakawanda zvenguva pfupi shanduro dzemahara software uye zvishandiso zveGNU / Linux, pakati pazvo zvatingataure nharaunda yeGNOME 3.28 uye nyowani modular repodhi Fedora 28. Server.
Chii Chitsva muFedora 28
Ona yangu @Fedora # Modularity kutaura kwandaifanirwa kupa pairi #FOSDEM! Dzidza kuti sei #Linux Kugovaniswa kunogona kufamba nekukurumidza uye kunonoka panguva imwe chete. https://t.co/uaYxcoApGt
- Adam Šamalík (@adsamalik) 28 March we2018
Fedora modularity chirongwa ichivimbisa kuti sysadmins ivo vanogona kumhanyisa akawanda vhezheni yesoftware imwe pamushini mumwe chete vasina kukanganisa kugadzikana kwayo kana kuita. Pamusoro pezvo, Fedora 28 Server inotsigira AArch64 (ARM 64) dhizaini sekutanga kwekuvaka.
Panzvimbo pekuparadzanisa modular inoshanda sisitimu, isu takawedzera modular repository padhuze neyakajairika repositi. Iine Fedora Server edition iyo modular repository ichave ichiwanikwa ipapo ipapo. Muchakwanisa kuwana mamwe mamodule nhasi uye akawanda achasvika pakuburitswa zviri pamutemo kwaFedora 28, ”akadaro Eduard Lucena, nhengo yeboka rebudiriro.
Chimwe chinhu chitsva chakakosha kutaura ndechekuisirwa yazvino compiler muunganidzwa (GCC) 8, iyo GNU C 2.27 raibhurari, Golang 1.10, Ruby 2.5, Kubernetes 1.9 uyezve, Inomhanya pasi peLinux Kernel 4.15.
Fedora 28 Beta inowanikwa pamwe nenzvimbo GNOME, KDE, Xfce, LXDE, LXQt, MATE, Cinnamon uye SoaS, Atomic Host uye ARM edhisheni yeRaspberry Pi 2 uye Raspberry Pi 3.
Unogona kudhawunirodha Fedora 28 Beta izvozvi kana iwe ukaenda kune yepamutemo peji, zvakadaro, iwe unofanirwa kuyeuka kuti iyi vhezheni yakaburitswa yakanangana nekuyedzwa uye haifanire kushandiswa munzvimbo yebasa. Fedora 28 Fainari inotarisirwa kuburitswa kutanga kwemwedzi unouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Iyo Fedora 28 beta yave kuwanikwa nezvakawanda zvitsva maficha
Authenticator, gadzira makodhi ekusimbisa-nhanho-mbiri paLinux